BASELWORLD 2018 - Mahafinaritra ny mandeha fiara miaraka amin'ny tolotrasa fanoloana Basel -
Isaky ny lohataona, i Basel dia manohana ny orinasa 1800 manolotra ny famolavolany sy ny fambolena firavaka amin'ny Baselword. Tsy ilaina ny mitaraina momba ny isan'ireo mpitsidika amin'ity sehatra iraisam-pirenena ity, satria amin'ny herintaona, 2017 dia andrasana ny hisolo tena an'ireo mpivarotra 100.000 mpivarotra sy mpaninjara lehibe ao amin'ny World Watch and Jewelery Show. Amin'ny martsa 22 2018 dia hanokatra ny vavahadin-tsoavaly ny mpitsidika.
Miaraha amin'ny BASELWORD - Transfer Service Basel
Ny EuroAirport Basel dia minitra vitsy amin'ny fiara avy ao amin'ny foibe fampirantiana. Saingy tena tianareo tokoa - tahaka ireo mpanao dia lavitra hafa - hitsidika ny fampisehoana amin'ny orinasa mandritra ny andro maromaro. Imbetsaka ireo mpandeha dia milaza amintsika fa ny fifanakalozan-kevitra sy ny fifampiraharahana amin'ny mpanamboatra, ireo fahitana vaovao maro sy ny fitsangatsanganana amin'ny alàlan'ny trano fampirantiana dia andro tena mampatahotra indrindra amin'ny taom-pambolena avy amin'ny orinasa. Izany no mahatonga antsika hanolotra tolotra fiara manokana ho an'ny andron'i Baselworld.
Amin'ny fonosana tsara tarehy dia ho tonga amim-pilaminana sy amim-pilaminana ianao avy amin'ny hotely na mivantana avy any amin'ny seranam-piaramanidin'i Basel amin'ny fotoana anaovana azy. Manao style izy ireo First Class Limousine Fitaovana alemana ary tsy mila manahy momba ny lozam-pifamoivoizana mavesatra na mora vidy amin'ny foibe fampirantiana. Ankoatra ny fahamoram-potoana sy ny fahasoavan'ny mpandeha dia malaza amin'ny mpandraharaha isika satria mandinika tsara ny fahamalinana mandritra ny dia.
Fandefasana fandaharana Basel mora online booking
Fantatsika - ny fotoana dia vola. Izany no mahatonga antsika hanana iray ho anao Famandrihana Online fitaovana efa nasiana fipetrahana. Amin'ny ora iray monja dia mitazona fotoana isika, ary vonona ho anao manokana ho an'ny solosaina manokana sy ny chauffeur eo anoloan'ny boaty fandraisam-bahiny na any amin'ny seranam-piaramanidina amin'ny faran'ny fahatongavanao sy ny fialan-tsasatra.
Ny ekipan'ny Biraon'ny Transfer Transfer Basel dia maniry anao ny hijanona aty amin'ny Baselworld sy ny orinasa tsara
Notsongaina tamin'ny: Airport shuttle Baselworld Fandefasana ny seranana Fampandehanana ara-barotra Fivoriam-be
taxi.flughafen March 16, 2017 Novambra 18, 2017 Basel, Airport mivezivezy, Limousine service No comments
← 360 ° Fanomezana tolotr'asa ho an'ireo vahiny hotely any Basel
BASELWORLD 2018 - Fialam-boly amin'ny Trans-Service Basel →